Vaovao - Fampandrenesana fangatahana hydrogel amin'ny fitaovana radioteram-bolus
Fampandrenesana fampiharana ny hydrogel amin'ny fitaovana radiotherapy bolus
Ho an'ny faritra kendrena ambonimbony (fivontosana), na ny haitao nentim-paharazana fanamafisam-peo elektronika na ny teknolojia fanodinana taratra X-ray modified, raha mamakivaky ilay sela mivaingana ny taratra, ny faritra kendrena ambonimbony dia vokatry ny fisian'ny fananganana doka. Ny fatra taratra dia tsy mitovy mihitsy, izay misy fiantraikany amin'ny vokatry ny radiotherapy.
Amin'izao fotoana izao, ny fisafidianana compensator ho an'ny tavy (bolus) ny hateviny sy ny hakitroka mety hanaronana tanteraka ny tampon'ilay vatan-tsinontsinona dia afaka manatsara ny fitoviana amin'ny fizarana fatra ao amin'ny faritra kendrena ambonimbony ary manatsara ny fahombiazan'ny radiotherapy. Matetika kokoa ny voalaza etsy ambony. Raha tsorina, ny tambatsela mivaingana dia hahazo fatra taratra bebe kokoa aorian'ny rakotra ny tambatamby tambonin'ny tambonin'ny tambon-tany, fanatsarana ny vokan'ny fitsaboana.
Ny fitaovan'ny tamban-tsolika (bolus) amin'izao fotoana izao dia misy lakaoly menaka, ary eo ampelatanan'ny orinasa amerikana ny patanty.
Avy eo, tamin'ny alàlan'ny fifandraisana teo amin'ny orinasanay sy ireo dokotera radiotherapy an'ny Hopitaly Affiliated faharoa an'ny Oniversite Soochow, dia fantatray fa ny fepetra takiana amin'ny klinika amin'ny onitra dia ny hakitroka dia mitovy amin'ny 1g / cm³, izay mitovy amin'ny hakitroky ny rano.
Satria ny orinasanay dia manana traikefa fikarohana nandritra ny taona maro momba ny hydrogels sy ny vokatra mifandraika amin'izany, miorina amin'ny angona andrana sy ny andrana andrana dia fantatray fa ny hakitroky ny ankamaroan'ny hydrogels dia mitovy na manakaiky ny 1g / cm³.
Vokatr'izany, ny orinasanay dia nandamina fifandraisana amin'ny daholobe, Mampiasà formul hydrogel efa misy。Namorona tambiny tamby） bolus） vokatra, ary nanao fitsapana dosimetry mifandraika, ary nahazo valiny nahafa-po.
Amin'ny lafiny fananana ara-batana, ny hydrogels dia mitovy amin'ny gels menaka. Na izany aza, ny tombony lehibe amin'ny hydrogels dia ny vidiny. Raha liana amin'ity vokatra ity ianao dia mifandraisa aminay.
Fanonerana ara-nofo mahazatra, misy lakaoly menaka
Vokatra fanonerana tisu hydrogel an'ny orinasanay.